पौष ९ गते शुक्रबार – यस्तो छ तपाईको भाग्य ! आफ्नो राशिफल हेर्नुहोस् « Gaunbeshi
पौष ९ गते शुक्रबार – यस्तो छ तपाईको भाग्य ! आफ्नो राशिफल हेर्नुहोस्
प्रकाशित मिति : 23 December, 2021
मेषः सुखद समाचार सुनेर दिनको सुरुवात हुनेछ । तपाईको प्रेम रहेको छ भने सफल हुनेछ । आफन्तहरुसँगको भेटघाटले मन प्रफूल्लित होला । जागिरमा पदोन्नतति होला । व्यापारमा फाइदा हुने देखिन्छ । आफन्त तथा दाजु भाइसँग सानो कुरामा विवाद बढ्नेछ भने गैर व्यायिक कामहरु नगर्नुहोला समय तपार्ईँको पक्षमा रहेकोछैन ।
बृषः रमाईलो यात्राको तय हुने तथा व्यापारबाट मनग्गे नाँफा कमाउँन सकिनेछ । अध्ययन अध्यापनमा अरुलाई पछिपार्दै पुरस्कार तथा प्रशंसा पत्र जित्न सकिनेछ । नराम्रो कुरा गर्ने आफन्तबाट जोगिनुहोला । धार्मिक कार्यमा मन लाग्नेछ । अध्ययनमा सफलता मिल्नेछ । व्यावसायिक सफलता ।
मिथुनः व्यापार व्यावसायमा लगानी गर्दा पछिसम्म आम्दानी भैरहनेछ । पढाइ लेखाइमा सुधार भएर जाने तथा उत्कृष्ट नतिजा हात लाग्नेछ । घरायासी कलह बढ्ने योग छ । निर्णय लिन द्विविधा होला । प्रेममा बाधा आउने छ । अध्ययनमा सुधार, आर्थिक लाभको सम्भावना ।
कर्कटः व्यापार व्यावसायमा वैदेशिक क्षेत्र जस्ता कारोबार फस्टाएर जानेछ भने विदेश यात्राको तय गर्न सकिनेछ । सामाजिक कार्यबाट प्रसिद्धि कमाइने छ । धन सिञ्चित हुनेछ । बोलीको प्रभाव बढ्ला । जागिरमा पदोन्नतिको हुने सम्भावना छ ।
सिंहः नयाँ व्यापार व्यवसाय गर्दा उत्तम देखिन्छ । घर परिवारमा आत्मियताको भाव बढ्नेछ भने मित्रता सुमधुर भएर जानेछ । प्राकृतिक स्रोत तथा साधनको प्रयोग मार्फन आम्दानी बढाउँन सकिनेछ । मन प्रफूल्लित रहनेछ । शत्रु सक्रिय हुनेछन्, आफन्तबाटै पनि जोगिनुपर्ने देखिन्छ ।
कन्याः व्यापारमा हानी हुने योग छ । राजनीतिमा शुभ देखिन्छ । सामाजिक कार्यबाट लाभ मिल्नेछ । आकस्मिक धनमालको लाभ हुने योग छ ।कार्यक्षेत्रमा आफ्नै सहयोगीले फसाउँन सक्छन्,ध्यान दिनुहोला । तपाईको राम्रा विचारलाई अरुले गलत तरिकाले व्याख्या गरी साख गिराउन खोज्नेछन् ।
बृश्चिकः प्रेममा सफलता मिल्नेछ । आकस्मिक धन प्राप्तिको योग छ । मु द्दा मामिला तपाईको पक्षमा हुनेछन् । बिद्या तथा प्रतिस्पर्धामा सफलता पाउँन निकैनै मिहिनेत गर्नुपर्नेछ । स्वास्थ्य समस्याले सताउनेछ भने आफन्त तथा विश्वास गरेकै हरुबाट धोका हुनेछ ।
धनुः पारिवारीक अवस्था, विवाहित जीवन तथा माया प्रेममा सामिप्यता बढेर जानेछ । व्यापार व्यावसायमा प्रशस्त आम्दानी हुनेछ । लामो तथा रमाईलो यात्रा हुने हुदा मन प्रशन्न हुनेछ । चो ट पटक लाग्न सक्छ । वादविवाद हुने सम्भवान छ । आलोचना गर्नेहरु प्रशस्त हुनेछन् ।
मकरः व्यापार व्यावसायमा नाफा कमाउन निकै नै समय दिनुपर्नेछ । घर परिवारमा आफन्त तथा पति पत्नी विच मनमुटाव बढ्नेछ । अनावश्यक झमेला सम्भावना छ । स्वास्थ्य समस्याले सताउनेछ भने आफन्त तथा विश्वास गरेकै हरुबाट धोका हुनेछ ।
मीनः आफन्तबाट साथ सहयोग मिल्नेछ । मिष्ठान्न भोजन हुनेछ । अध्ययनमा बाधा आउँला । सर्वसाधारण सहयोग नगर्ने हुँदा राजनीति तथा समाजसेवामा पनि आजको दिन लाग्ने समय छैन । स्वास्थ्य समस्या आउँने योग रहेकोछ ।